Fivarotana horonan-tsarimihetsika manokana 'LIVE' vaovao an'i Gucci!
Mandeha avy amin'ny andiam-panokanana natokana ho an'ny serivisy serivisy any Florence, Italia, Gucci Live dia mikendry ny hamerina ny traikefa manokana amin'ny fiantsenana an-tserasera. Miaraka amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra mivarotra izay miverina any amin'izay toerana akaiky ny ambaratonga teo aloha, ny marika sy ny mpivarotra dia mamorona fomba vaovao ahafahana mifandray aminy ao ...
Birao sy orinasa Olicom
Biraon'ny Olicom sy ny orinasa Olicom dia tany am-boalohany dia fantatra amin'ny hoe Huakai Shoes & Garments Co. Ltd ary ao amin'ny tanàna Jinjiang no renivohitr'i Sina. Tongasoa eto mitsidika anay hatrany amin'ny fotoana rehetra.T minitra eo ho eo amin'ny 10 min eo amin'ny seranam-piaramanidina Jinjiang ary 25 minitra miala ny lalamby Jinjiang ...
Ny # 127thCantonFair dia hatokana amin'ny fifaninanana an-tserasera ary hamorona tontolo fifampiraharahana azo itokisana amin'ny Internet. Mpividy sy fampirantiana an'arivony no hifanerasera tanteraka mandritra ny 10 andro. Nanjary mora kokoa ny fampiroboroboana ny fihenan'ny mpivarotra ary mampiseho ...